Ungazitshintsha njani izihluzi kwiTik Tok: Isifundo esilula sokutshintsha izihluzi | Creatives Online
Umthombo: Umculo kunye neMarike
Esinye isixhobo esiye sasasazeka kakhulu namhlanje ngokungathandabuzekiyo nguTik Tok. Ayisosicelo nje esenzelwe ukuzonwabisa, kodwa sele isetyenzisiwe ngabasebenzisi abanje: abaphembeleli, abadlali bebhola, abadlali beqonga kunye nabadlali, amagcisa njl.
Kodwa ayinalo kuphela lo msebenzi, kodwa iphinda incediswe yinxalenye enkulu yobugcisa kunye nokudala. Apha kulapho sidibanisa khona izihluzi zeefoto.
Kule post, siya kukucacisela ngamanyathelo ambalwa alula, indlela yokutshintsha ezi zihluzo kwaye kwakhona, siya kukubonisa ezinye zezona zihluzo zimele.
1.2 Oko iqulethe
2 Uzitshintsha njani izihluzi okanye iziphumo
2.1 Yongeza okanye utshintshe izihluzi
3 Ezona zihluzo
3.1 IChroma (Isikrini esiluhlaza)
3.3 Isipili esibuhlungu
3.4 Zoom yoBuso
3.5 Ixesha Warp Scan
Ukuba ungomnye waba bantu abangekawazi umhlaba weTik Tok, siza kukunika isishwankathelo esincinci sento esinokuyenza esi sicelo, kwaye uya kuqonda ukuba kutheni isefashonini namhlanje kuluntu lwethu. .
ITik Tok sisicelo semvelaphi yaseAsia, oko kukuthi, yasekwa eAsiya. Eyona nto ibonakalisa kakhulu esi sicelo kukulula kwayo ukwabelana okanye ukwenza iividiyo zomculo. Isicelo saqaliswa ngoSeptemba 2016, oko kukuthi, kuthatha iintsuku ezingama-200 kuphela ukuphuhlisa, ngoko kubonakala ngathi babenemibono ecacileyo.
Ukukhula kwayo kuye kwanesantya esimangalisayo, kuba ngokutsho kwee-portal zaseTshayina, isicelo sifikelele kwi-66 yezigidi zabasebenzisi abasebenzayo mihla le, ngelixa eminye imithombo ibonisa ukuba sele idlulile kumqobo we-130 yezigidi.
Ukuba sithetha ngemisebenzi yayo, sinokuzisekela ekubeni ivumela ukudala, ukuhlela kunye nokulayisha iividiyo zomculo zeselfies Umzuzu o-1, ukwazi ukusebenzisa iziphumo ezahlukeneyo kunye nokongeza imvelaphi yomculo. Ikwanayo neminye imisebenzi yeArtificial Intelligence, kunye ibandakanya iziphumo ezizodwa ezitsala amehlo, izihluzi, kunye neempawu zokwenyani ezandisiweyo.
Indlela yakhe yokusebenza ngemathiriyeli yeaudiovisual ilula kakhulu, kwaye iqulethe iindlela zokuhlela ekulula ukuzisebenzisa ukuze wonke umntu enze iividiyo ezimnandi ngaphandle kokuba nolwazi oluhle lokuhlela. Ukongeza, isicelo sibandakanya neminye imisebenzi efana ukukwazi ukuthumela imiyalezo, iivoti, uluhlu lwabahlobo kwaye ngokuqinisekileyo inkqubo yabalandeli kwaye ilandelwe. Iyafana nesitayile se-Instagram, kodwa igxile kwiividiyo.
Ngaphandle kweevidiyo, imowudi yokupapasha umxholo ikuvumela ukuba wenze iividiyo ezishukumayo ukusuka kuthotho lweefoto ozikhethileyo. Ukongeza, isicelo sikwabandakanya icandelo apho unokuthumela imiyalezo kwabanye abasebenzisi njengoko unokwenza kwi-Instagram, kwaye uhlele iprofayile yakho kunye nedatha oyithethayo ngawe.
Usetyenziso luqulathe isikrini esiphambili apho sinokubukela ezona vidiyo zidumileyo okanye ezabantu sibalandelayo, sikwazi ukutyibilika phezulu okanye ezantsi ukuya kwiividiyo. Kwakhona kukho iphepha lokuphonononga apho ku sinokukhangela iiklip okanye sihambe phakathi kwee-hashtag oko kunokuba nomdla. Xa sibukele ividiyo, iboniswa kwiscreen esipheleleyo, kunye nothotho lwee-icon ngasekunene esinokulandela ngazo umsebenzisi, ngathi, izimvo okanye ukwabelana ngekliphu.
Ngamafutshane, sisicelo esisebenza njengenethiwekhi yoluntu, kodwa ikuvumela ukuba usebenze ngobugcisa kunye nezixhobo ezivakalayo kunezinye iinkqubo. Isicelo siyafumaneka kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android, kwaye simahla. Kuyinyani ukuba ngaphakathi kwesicelo unokufumana iinketho zokuhlela ezifuna iindleko ezongezelelweyo, kodwa zizonke, zikhululekile.
Embindini ukwanalo iqhosha apho unokufikelela kwi-protagonist ephambili yesicelo, ukurekhoda ividiyo kunye nesixhobo sokuhlela. Unokurekhoda iividiyo zakho ngokuthatha ezininzi, kuba i-app irekhoda kuphela ngelixa ubambe iqhosha elihambelanayo. Ewe, ngaphambi kokuba uqale ukurekhoda ividiyo uya kuba neenketho ezininzi zokucoca kunye neziphumo onokuzilawula ngazo.
Xa uhlela ividiyo, unokukhetha ukuthatha okanye izigaba apho ukongeza ezinye iintlobo zeziphumo ngokwakho. Unayo, umzekelo, uthotho lweefilitha ezifanayo nezo ze-Instagram, ngokunjalo iintlobo ezahlukeneyo zeziphumo zokukhohlisa iividiyo. Umhleli uya kuphawula iindawo ezahlukeneyo apho uhlele ividiyo ngemibala eyahlukileyo.
I-20% yayo yonke ingeniso ye-TikTok ivela e-US Le eneneni ingaphantsi kunangaphambili kwaye i-China, kunye ne-69%, isengowona mthombo wengeniso. Ngaphambi kokufika kweentengiso, I-42% yengeniso yavela eUnited States, kodwa oko akubandakanyi ingeniso evela kwinguqulelo yesiTshayina yosetyenziso kwi-Android.
Isiseko sabasebenzisi beTikTok sisahambelana ngokusondeleyo neso Musical.ly. Uninzi lwabasebenzisi bayo base-US abasebenzisa esi sixhobo bancinci kwaye i-25.8% iphakathi kwe-18 kunye ne-24 yeminyaka ubudala. I-24.5% ineminyaka engama-25 ukuya kwengama-34 ubudala, nto leyo ecebisa ukuba uninzi lwabasebenzisi beTik Tok bebesebenzisa le app, nangona sele beneminyaka engama-25.
En 2019 Abenzi bomthetho baseIndiya babenexhala kakhulu ngeTikTok kangangokuba bagqiba kwelokuba bayivale okwethutyana le app. Babenexhala lokuba iTikTok izakuveza abantwana kumxholo ongafanelekanga. Ngelixa ukuvalwa kungakhange kuhlale ixesha elide, kuxabisa malunga ne-15 yezigidi zabasebenzisi abatsha.
Uzitshintsha njani izihluzi okanye iziphumo
Izihluzi okanye iziphumo zisetyenziswa ukwenza ubuqu kwaye wongeze iinkcukacha ezingakumbi kwiividiyo zakho. Ezi ziphumo zinokongezwa ngaphambi nangemva kokurekhoda ividiyo, kodwa ezinye iziphumo zifumaneka kuphela ngaphambi kokuba ukurekhoda kuqale, kwaye ezinye ziyafumaneka emva koko.
Ukurekhoda ividiyo enezinye iziphumo eziboniswa nguTik Tok, kufuneka ulandele la manyathelo:
Cinezela i Effects icon ekhohlo kweqhosha elibomvu lerekhodi kwiscreen sekhamera.
Jonga kwaye ukhangele iindidi ezahlukeneyo zeziphumo kwaye ucofe kwenye yazo.
Jonga kwangaphambili iziphumo kwaye ukhethe enye.
Cofa kwisikrini sokurekhoda kwaye uqalise ukwenza ividiyo yakho.
Ukuba into esiyifunayo kukugcina kukugcina isiphumo, oko sinokhetho lweeFavorites. Iinketho ezithandwayo zifumaneka kwikhusi, ngokohlobo lwe icon yebhukhimakhi. Kuya kufuneka ukhethe isiphumo oyifunayo kwaye ucinezele i icon esele siyikhankanye. Ngolu khetho uqinisekisa ukuba umphumo uhlala ungaphakathi kokufikelela kwakho, kwaye ufezekiswa ngendlela elula kakhulu kwaye elula.
Yongeza okanye utshintshe izihluzi
Ukutshintsha iziphumo ezifana nesihloko, kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Cofa Umbhalo ezantsi kwesikrini sokuhlela.
Khetha ifonti oyifunayo kwaye wenze umbala wombhalo kunye nemvelaphi.
Cofa kwaye utsale umbhalo ukuwususa kwindawo oyifunayo kwividiyo yakho.
Ukutshintsha ubungakanani okanye ukuguqula isihluzo okanye isiphumo:
Goba okanye wandise isicatshulwa kwaye ulungise ubungakanani yokubhaliweyo ude ufumane efunekayo.
Ukuba sifuna ukongeza isincamathelisi okanye i-emoji:
Cofa izincamathelisi ezantsi kwesikrini sokuhlela.
Khetha izincamathelisi okanye i-Emojis thebhu, okanye khangela imifanekiso ye-GIF enoopopayi.
Cofa into efunekayo ukuyikhetha kwaye tsala oopopayi naphi na kwisikrini.
Ezinye zezona zihluzo zingcono zezi:
IChroma (Isikrini esiluhlaza)
Amathuba ngesihluzo phantse apheli, kuba ungabeka imvelaphi oyifunayo. Ukukunika umbono omncinci, ekuthandeni kwayo, kukho iividiyo ezizigidi ezingama-74.7 kunye nesi sihluzo.
Esi sihluzo yahlula amehlo akho nomlomo wakho ebusweni bakho; ukukwazi ukuzazisa kwizinto ezingaphiliyo okanye kubuso obudumileyo.
Ngokuyinene, Iza kuphazamisa umfanekiso kwaye idale ama-ripples amaninzi emfanekisweni. Umcu wentelekelelo ukuthatha ithuba kuyo.
Esi siphumo siya kusondeza ebusweni njengoko uhamba. Isetyenziswe kwiividiyo ezizigidi ezili-13 ukuza kuthi ga ngoku.
Ixesha Warp Scan
Eli cebo lokucoca liza kumisa indawo engentla komgca oluhlaza, kwaye ngalo ungenza amaqhinga amnandi ngokwenene.
Ngamafutshane, iTik Tok iye yaba yenye yezona zinto zisetyenziswayo kwihlabathi liphela. Singatsho ukuba ekujoliswe kuyo ngabasebenzisi abancinci kunye nabadala. Sisicelo esinokusetyenziswa njengenethiwekhi yoluntu kuba, njengoko kukhankanyiwe, inabalandeli abaninzi.
Uninzi lweevidiyo zentsholongwane emhlabeni zivela kwesi sixhobo, kwaye le ngxelo ayimangalisi, kuba iTik Tok ifikelele kubasebenzisi abanenani eliphezulu labalandeli kunoFacebook kunye ne-Instagram zidityanisiwe.
Ngoku lixesha lokuba ukhuphele usetyenziso kwaye uqalise ukwenza owakho umxholo. Unokuqala ngento esisiseko, ividiyo elula leyo qala kwinto eya kuba bubuchule bakho kunye nobuntu bakho. Yongeza izihluzi kunye neeaudio zomculo, yongeza esinye isicatshulwa esichaza into ofuna ukuyenza okanye ofuna ukuyenza kwaye, ewe, phanda kwaye ujonge abanye abasebenzisi abenza umxholo ofanayo okanye owahluke ngokupheleleyo kowakho.
Ngaba uyikhuphile okwangoku?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ungazitshintsha njani izihluzi kwiTik Tok
Indlela yokukhupha imibala kumfanekiso